सिङ्गापुरमा झण्डै शून्य संक्रमित, कसरी नियन्त्रण गरिरहेको छ कोरोना ? - Vishwanews.com
सिङ्गापुरमा झण्डै शून्य संक्रमित, कसरी नियन्त्रण गरिरहेको छ कोरोना ?
काठमाडौं\_एजेन्सी । सिङ्गापुर कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा सुरक्षित मुलुकको पहिलो नम्बरमा रहेको पाइएको छ । ब्लूमबर्गको एक प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै बीबीसीेले जनाए अनुसार यो मुलुकमा समुदायमा संक्रमण शून्य छ । आगन्तुकमा देखिएमा तत्काल त्यसलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
संसारमा मानिसहरुको ज्यान तिब्र गतिमा गइरहेको समयमा पनि सिङ्गापुरले एक सामान्य जिन्दगी जिउने वातावरण बनाउन सफल भएको छ । ब्लूमबर्गको प्रतिवेदन अनुसार सिङ्गापुरले न्युजिल्यान्डलाई उछिनेको छ र सुरक्षित स्थानमा एक नम्बरमा पर्न सफल भएको हो ।
यो सूचीको आधार कोरोना सङ्क्रमणको दर, मानिसहरुलाई घुमफिरमा दिइएको स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएको हो । सिङ्गापुरले कोरोना नियन्त्रण भित्र राख्नुमा खोप अभियानलाई पहिलो कारण मानिएको छ । उसले १५ प्रतिशत मानिसमा पुरै डोज खोप दिन सफल भएको छ ।
Photo by Maverick Asio / SOPA Images/Sipa USA)(Sipa via AP Images)
मुलुक सानो र शक्ति सम्पन्न भएका कारण उसले यो सम्भव गरि देखायो । यहाँ मात्र ६० लाख जनसंख्या रहेको छ । सिङ्गापुरले सीमा सुरक्षामा कडाई गरि मुलुक भित्रको गतिविधि यथावत राखेको छ । यसले संक्रमण भित्रन पाएको छैन ।
यो मुलुकमा एक वर्षको अवधिमा दुई महिना मात्र लकडाउन भएको छ । सोही समयमा सिंगापुरले कोरोना करीव नियन्त्रणमा लिएको हो । सरकारले समेत महामारी नियन्त्रणमा ठूलो खर्च गरेको छ । गरिब र धनीबीचको असमानता नदेखियोस भनी भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।